Apple inoronga hombe online vhidhiyo mutambo chitoro ... ichachinja Linux? | Linux Vakapindwa muropa
apuroSekureva kwenhepfenyuro Cheddar iri kuronga kuvhura chikuva chikuru chevatambi, iri iguru vhidhiyo mutambo wechitoro kwaunogona kutenga ese emavhidhiyo mitambo yaunoda. Icho chingave chiri mhando cheNetflix asi mitambo, iyo yaizokwezva vazhinji vanogadzira uye yaizogadzira indasitiri huru, nekuti zvese zvinobatwa nekambani yaCopertino zvinoita kunge zvichashanduka kuita goridhe.
Izvo hazvisati zvine chokwadi, uye pamwe zvichakunda kana pamwe zvicharamba zviri mudhirowa rekukanganwa semamwe mapurojekiti, asi kana zvikazadzikiswa, izvi zvinogona kureva pamberi nepashure. Iyi haisi nhau yeLxA kana inogona kunge isingaite senge, asi izvi zvinogona kukanganisa simba indasitiri iri kuwedzera ye vhidhiyo mutambo weLinux. Uye zvinogona kukanganisa chaizvo kana zvisina kunaka ...
Kana ikakanganisa zvisizvo, zvandisingafungi kudaro, ingangove nekuti Apple yakatambanudza maoko ayo ikashandisa simba rayo kuve nemamwe mazita muchitoro chayo, izvo zvaizosiya Windows kunze kwemutambo uye, nezvakawanda chikonzero, zvakare kuLinux. Izvi hazvifanirwe kunge zviri seizvi, uye sezvandinenge ndataura, ngative netariro sezvandinoda uye tizviise muchiitiko icho icho zvakanaka kukanganisa.
Iwe unoziva kuti Linux mazita anga achikura zvakanyanya, achikura kusvika ku400% mune rimwe gore uye kuti yekupedzisira 2018 isu takaguma pamusoro pe5000 mazita paSteam yeLinux. Chiitiko chisingafungidzike makore apfuura, asi dai Apple yaizovhura chitoro uye ichikwezva vazhinji vevagadziri kupuratifomu yayo (pasina yega), panogona kuve nekukanganisa kwakasarudzika kumazita akapihwa kuLinux, nekuti mapuratifomu ese ari Unix uye vanogovana hombe chikamu kukura.
Naizvozvo, kubheja kwakasimba neApple muchikamu che vhidhiyo mutambo paUnix Zvinogona kureva kuti pachave nenhau zhinji dzakanaka kune vashandisi veLinux, sezvo sekutaura kwangu, Linux ine diki asi ine muto wemusika uye zvingave nyore kutakura mazita macOS kuLinux iyo kubva kuWindows kuenda ku macOS kana Linux sezvazviri kuitwa izvozvi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Apple inoronga hombe online vhidhiyo mutambo chitoro ... ichachinja Linux?
Pamberi peSteam paitove nemitambo inodarika zviuru zvishanu yeGNU / Linux, ndapota, zvinoita sekunge vakagadzira mitambo yeGNU / Linux.
Chinhu chega chavaka "gadzira" yave mitambo ye DRM uye kuchera dhata nemaitiro edu emitambo.